Universal Online TV | राजधानीमा डेंगुको आतंक, बिरामीको संख्या ६ वर्षयताकै उच्च राजधानीमा डेंगुको आतंक, बिरामीको संख्या ६ वर्षयताकै उच्च
राजधानीमा डेंगुको आतंक, बिरामीको संख्या ६ वर्षयताकै उच्च
प्रकाशित मिती: २३ भाद्र २०७६, सोमबार
२३ भदौ, काठमाडौं । राजधानीमा डेंगु रोगको त्रास फैलिएको छ । ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी डेंगु रोगका बिरामी भेटिएपछि राजधानीमा डेंगु रोगको त्रास फैलिएको हो ।
राजधानी बाहिरकेही महिना अघिदेखि नै डेंगुको संक्रमण फैलँदा पनि सरकारले रोकथाम गर्न सकिरहेको छैन ।
आइतबार एकैदिन राजधानीमा ३६३ जनाको डेंगु परीक्षण गराइएकोमा १९४ जनामा डेंगु रोग फेला परेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सूचना अधिकृत रुपनारायण खतिवडाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यस्तै, शनिबार २९६ जनाको परीक्षण गराएकोमा १४४ जनामा डेंगु रोगको संक्रमण फेला परेको थियो ।
डेंगु रोगका सबै संक्रमित बिरामीहरु अस्पताल भर्ना नहुने उनले बताए । भर्ना भएका मध्ये १२९ जना बिरामी उपचार गराएर घर फर्किसकेको र २३ जना बिरामी अहिले पनि अस्पतालै रहेको खतिवडाले जानकारी दिए । अन्यलाई घरमा नै आराम गरेर नियमित औषधी खाना सल्लाह दिएर पठाइएको उनले बताए ।
टेकु अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार राजधानीमा ०७०/७१ मा ६० जनामा डेंगु देखिएको थियो । ०७१/७२ मा ५८ जनामा डेंगुको संक्रमण पाइएको थियो भने ०७२/०७३ मा २२ जनाका यो रोग देखा परेको थियो । त्यस्तै ०७३/७४ मा १४० जना र ०७४/७५ मा २५३ जना डेंगु रोगी फेला परेका थिए ।
०७५/७६ को पाँच महिनामा ६ वर्षयताकै डेंगुका बिरामीको तथ्याङ्कलाई उछिनिसकेको खतिवडाले बताए । भदौ १५ गतेदेखि यता बिरामीको चापलाई नियाल्दा डेंगु रोगका बिरामीहरु अझै बढ्ने संकेत देखा परेको उनले बताए ।
बैशाखको अन्तिम सातादेखि नै देशका विभिन्न भागमा देखा परेको डेंगु रोगको त्रास राजधानीमा पनि फैलिएपछि अस्पतालमा मानिसहरुको भीड लागेको छ ।
दैनिक ४ सयभन्दा बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका डा. पुनले आधा बिरामीमा डेंगु रोगको संक्रमण फेला परेको बताए । उपत्यकाको डल्लु, असन, जैसीदेवल लगायतका स्थानबाट आउने विरामीमा डेंगु रोगको संक्रमण देखा परेको पुनले बताए ।
विहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बिरामी हेर्दै आएका डा. पुनले दिनभरि नै बिरामीको चाप एकैनास हुने गरेको बताए ।
डेंगुको उपचार गराउने चिकित्सक नै बिरामी
डेंगु रोगका बिरामीको उपचार गराउँदै आएका टेकु अस्पतालका चिकित्सकसहित १२ जना कर्मचारी डेंगु रोगबाट संक्रमित भएका छन् । अस्पतालका कन्सलटेन्ट फिजिसियन एक जना र मेडिकल अफिसर दुईजना सहित १२ कर्मचारीमा डेंगुको संक्रमण देखा परेको छ ।
उपचारपछि डेंगुबाट संक्रमित ६ जना कर्मचारी काममा फर्किसके पनि ६ जना भने अझै आराम गरिरहेका छन् ।
उपचारको व्यवस्था कसरी हुँदैछ ?
अस्पतालमा डेंगु रोगका बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालले २ वटा ज्वरो क्लिनिक अर्थात ‘ज्वरो डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ज्वरो आएर उपचार गराउन आउने बिरामीलाई उपचारमा सहजताका लागि हेल्प डेक्सका रुपमा ज्वरो डेक्स सञ्चालनमा ल्याएको खतिवडाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
दैनिक ४ सयजना भन्दा बढी बिरामी डेंगु रोगको परीक्षण गराउन आएकामा भदौ १५ यता आधा बिरामीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेको उपचारमा संलग्न टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनले बताए ।
बैशाखदेखि साउनसम्म ५२८ जना बिरामीमा डेंगुको परीक्षण गरिएकोमा ८५ जनामा डेंगु फेला परेको खतिवडाले बताए । भदौयता राजधानीमा डेंगुको चाप ह्वात्तै बढेको उनले बताए ।
भदौ १ गतेदेखि २२ गतेसम्म २ हजार ६८० जनामा डेंगु परीक्षण गरिएकोमा ४६ प्रतिशत बिरामी अर्थात १२ सय भन्दा बढीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेको खतिवडा बताउँछन् ।
बिरामीको अत्यधीक चाप बढेपछि ओपीडी कक्षसमेत थप गरिएको उनले बताए । अहिले ४ वटा ओपीडी डेक्स सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
डेंगु रोगको पहिचान भएका बिरामीलाई उपचारमा सहजता ल्याउन महिला वार्ड र पुरुष वार्डको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । बेडमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई अस्पतालले झुलको व्यवस्था गरेर छुट्टाछुट्टै वार्डमा राखेको उनले बताए ।
अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव
उपचार गराउन आउने बिरामीहरुले समयमा नै रगत, पिसाव लगायतका अन्य परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
रगत परीक्षण गराउने कक्षमा बिरामीहरुको भीड लागेको छ । रगत झिक्ने ल्याबको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बिरामी थप मारमा परेका छन् । रगत परीक्षण कक्षमा जनशक्ति अभावका कारण काममा ढिलाइ हुँदा बिरामीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
रगत परीक्षण गर्ने मेशिनमा प्रयोग गरिने केमिकलको अभाव हुँदा सोमबार केही समय परीक्षण कार्य समेत प्रभावित बनेको थियो । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा केही फितलो भएको अस्पताल प्रशासनले स्वीकार गरेको छ ।
अरु समयमाझैँ अस्पतालमा आउनेलाई सहज ढंगले उपचारको व्यवस्थापन गर्न जनशक्तिको अभावले असहज भएको अस्पतालले प्रशासनले जनाएको छ ।
अस्पतालमा रहेको जनशक्तिलाई बढी समय खटाएर बिरामीहरुको उपचार गराउँदै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
अस्पतालमा ६ वर्षयताकै डेंगु रोगका बिरामी उच्च भए पनि यसलाई डेंगुको त्रासकै रुपमा लिन नहुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सूचना अधिकृत खतिवडा बताउँछन् ।
सर्वसाधारणमा सचेतना बढेकाले सामान्य ज्वरो आउनेवित्तिकै उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेकाले बिरामीको संख्या बढी देखिएको उनको तर्क छ ।
विगतका वर्षभन्दा बिरामीको संख्या बढी नै देखा परे पनि उनले यसलाई चेतनाको वृद्धिले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर देखिएको खतिवडाको तर्क छ ।
डेंगु रोगबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरुको छ । लामखुट्टेबाट रोग सर्ने भएकाले घर वरपर खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न दिन नहुने डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा मसिना बिमिरा आउने, शरीरको पछाडिको भाग दुख्नेलगायतका लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
बालेन शाहलाई २१३९ मत, आधा मतान्तरले पछ्याउँदै केशव स्थापित,कसकाे कति (सूचीसहित)
चुनावका कारण पूजा र आकाशको ‘सम्झना बिर्सना’ पछि सर्‍यो
महँगो घर भाडा तिर्छन् यी बलिउड नायक नायिका